Nagu saabsan - Nanchang Lijinghui Trading Co., Ltd.
Waxaan aasaasnay ​​2014 warshaduna waxay bilaabmaysaa 2007;
Warshadda aan iska leenahay qiyaastii 2000-3000M³Waxay ku taalaa Nanchang City JiangXi Gobolka oo leh marin gaadiid oo haboon.
Waqtiga aasaaska shirkadda
Waqtiga aasaaska Warshadda
Tirada shaqaalaha shirkadda
Shirkadda ku takhasustay soo saaraha iyo dhoofinta dhammaan noocyada dharka tolidda; waxyaabaha our Main waa T Shirt, Polo Shirt, Hoody Sweatshirt, Carruurta Dharka, Taangiga top, Sports Wear iyo dharka kale marinka.
Waxaan badiyaa sameynaa amarrada OEM iyo ODM, Amarka tijaabada Yar (Low MOQ) waa la aqbalaa oo loo habeeyay astaantaada astaanta u gaarka ah, tag, xirmooyinka sidoo kale waa la heli karaa. Waxaan waligeen u dhoofinnay in ka badan kumanaan macaamiil ah oo ka kala yimid in ka badan 30 dal oo kala duwan; iyo lacagta dhoofinta sanadlaha ah oo gaadhay $ 100 milyan; Waxaan dhiseynaa xiriir wanaagsan oo aan la leenahay macaamiishayada calaamadeysan sida Carrefour Group iyo Laba Beeraha Inc iyo Calk Group iyo iwm ...
Haddii aad ka dooraneyso shey hadda jira buugyarahayaga ama aad raadineyso kaalmada injineernimada dalabkaaga, waxaad kala hadli kartaa xaruntayada adeegga macaamiisha wixii ku saabsan shuruudahaaga soo-saarka. Waxaan si diiran u soo dhawaynaynaa macaamiisha si loo dhiso iskaashi isla markaana loo abuuro mustaqbal ifaya annagoo wada jir ah.
Tayo Sare & Karti Sare
Shirkaddu waxay siisaa alaab tayo sare leh qiimo tartan iyo koox xirfadlayaal iib ah; U heellan xakamaynta tayada adag iyo adeegga macmiilka oo laga fiirsado, xubnaheenna khibradda leh ee khibradeysan (qiyaastii 100 pepole) iyo kooxo iibiya xirfadlayaal ah (qiyaastii 10 pepole) ayaa had iyo jeer la heli karaa si looga wada hadlo shuruudahaaga loona hubiyo qanacsanaanta macaamiisha oo buuxda.
Sanadihii la soo dhaafay, shirkadeenu waxay soo bandhigtay qalab casri ah oo isdaba joog ah oo ay ka mid yihiin Mashiinka Dawaarka, Mashiinka Birta iyo Mashiinka Daabacaadda.
Intaa waxaa dheer, Alaabtayadu way kulmi karaan
REACH iyo heerarka Azo Bilaashka ah iyo kuwa Hoose ee Cadmium waxaanan helnay BSCI Certified.
Hadafka: Dhisida Sumaddaada
Qiimayaasha Muhiimka ah: Xiriir badan, Is aaminaada, iyo alaab-qeybiyeyaasha xaalad guuleysi.